Fampidinana rehetra ho an'ny Prepar3D FSX - VARIOUS
52 627 3.14 (79)
Noforonina 28 Dec 2018
Nohavaozina taminy 30 Dec 2018
21 120 3.43 (7)
Noforonina 24 Jul 2015
Nohavaozina taminy 10 Jan 2019
HMS Bounty 18th Taonjato Tall Sambo kianja rigger rivotra tanteraka nandroahana azy tsirairay animation sy voafehy lain-tsambo, animation saina amin'ny tari-dalana sy ny rivotra haingana ...
62 036 3.87 (15)
Noforonina 13 Dec 2009
Nohavaozina taminy 27 Mar 2019
izany add-on dia vita tamin'ny FSDS3.5. Ny endri-javatra dia: modely LOD marobe misy sary mihetsika ho an'ny FSX/P3D. Kabinetra virtoaly tanteraka, tariby sy vokatra tanteraka. Misy karazana repertoire sy tady efatra.
209 153 4.14 (184)
Noforonina 6 Jul 2009
Nohavaozina taminy 16 Feb 2018
Ity ny sambo mpiady USS Nimitz & USS Eisenhower avy amin'ny andian-tsambo amerikana. Ity dia add-on antsoina hoe AI (Artition Intelligence) izay tantanin'ny solosaina.
95 046 3.16 (55)
Noforonina 15 Nov 2006
Nohavaozina taminy 7 Feb 2020
Tranoben-kaonty bitika tsotra dia tsotra nefa ilaina ho an'ny tambajotra sidina. 360 ° fijery, afaka maika na mihena ny fotoana, radar view, safidy amin'ny tilikambo efatra amin'ny heva samihafa, tolotra ATC